Ezinye zeembono ezintle eYurophu zixabiso kwaye kulula ukufikelela kuzo. Na lyo line, uhambo oluya eYurophu lunokufumana imali eninzi kakhulu ukuba awucwangcisi kwangaphambili. Ngelixa uninzi lweedolophu ezinkulu zaseYurophu luya kolula uhlahlo-lwabiwo mali lwakho, Kukho iindawo ezimbalwa zokuhamba eYurophu ezifikelelekayo ngokupheleleyo. Phezulu kwethu 7 Ezona ndawo zifikelelekayo zokuhamba eYurophu zilungele uhlahlo-lwabiwo mali kwaye aziyi kudlula kwi-50 yeerandi ngosuku umntu ngamnye.
Ezi zinto zifihliweyo aziweli mva kubuhle nakumlingo, kunezixeko ezinjengeParis neBerlin.
Ukwengeza, i eyona ndawo idumileyo e Germany, icologne emangalisayo yaseCologne ikhululekile ukutyelelwa. Uyilo lwayo lweGothic, zipeyintwe ngeefestile zeglasi, kwaye iimbono zomlambo zi-epic. Ukuba uyabuthanda ubugcisa, emva koko iCologne inayo iimyuziyam ezinkulu okanye umdla wobugcisa basesitratweni Ehrenfeld. Lo mmandla uyindawo ye-hip kunye nefashoni yeCologne, indawo yokuya kwikofu kunye nokuvuna.
Isixeko sisekhaya kwiinqaba ezimangalisayo kunye neegadi ezisimahla ukutyelela, kwaye ukuba unqwenela ukunyuka ujonge umbono we-epic, ke imali yokungena kwinqaba ingaphantsi 5 kowethu. Olunye ukhetho olukhulu lokuhlola isixeko ngokujoyina uhambo lokuhamba lwasimahla kunye nokuhlangana nabanye abahambi okanye ukubhukisha ICesky Krumlov yabucala isixeko ukuhamba uhambo yeqela lemigulukudu. Ngale ndlela unokufumana iimfihlo zesixeko, iintsomi, kunye neengcebiso zokuba nohambo olumangalisayo kumhlaba weentsomi.
I-Eger ilungile ngeempelaveki yokuphumla e-Budapest. Ukhetho phakathi kohambo losuku okanye ikhefu lesixeko esivela eBudapest konke okwakho, kodwa sicebisa ukuchitha ubuncinci impelaveki ende kwesi sixeko sithandekayo.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise iholide yakho kwezona ndawo zifikelelekayo eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "7 zeZona ndawo zifikelelekayo zokuHamba eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/?lang=xh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
efikelelekayo Uhlahlo lwabiwo-mali mzantsiba Umphakathi waseCzech TrainTravelBelgium TrainTravelHungary travelfrance travelgermany